ZANU PF labels Chamisa Zim’s 1st ever dictator for not going to Congress before 2023 polls – Zimbabwe Daily
ZANU PF labels Chamisa Zim’s 1st ever dictator for not going to Congress before 2023 polls
HARARE – The ruling party ZANU-PF has labelled Citizens Coalition for Change CCC president Nelson Chamisa Zimbabwe’s first ever dictator. ZANU PF says Chamisa grabbed the main opposition party, (MDC Alliance then) by force and avoided primary elections after the death of founder Morgan Tsvangirai.
Meanwhile, following reports that the CCC party will not hold Congress until after the 2023 harmonised elections, ZANU-PF Patriots says Chamisa is Zimbabwe’s first ever dictator.
“Please meet our first ever dictator, Nelson Chamisa, after the demise of Tsvangirai he imposed himself as MDC-A leader,he banned primary elections in his new party,he claims he is a caretaker leader for a new party yet the same new party never met to confirm that,” says ZANU-PF Patriots.
HARARE - The ruling party ZANU-PF has labelled Citizens Coalition for Change CCC president Nelson Chamisa Zimbabwe’s first ever dictator. ZANU PF says Chamisa grabbed the main opposition party, (MDC Alliance then) by force and avoided primary elections a...